Top 5 Free wmv Players u Mac Options
A Windows Media Video file (wmv), waa qaab caan video ay diyaariyeen Microsoft. Si kastaba ha ahaatee, Apple kumbiyuutarada ama qalabka ma awoodi doonaan in ay Radidiyaha ama taageeraan qaab file hooyo Microsoft ee. Sidaa awgeed, failure ee Apple ayaa QuickTime ciyaaryahan ee daafaca ka ciyaari faylasha .wmv.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad ku rakiban kartaa qaar ka mid fur-tago inaad ku darto taageero hooyo wmv ku soo gudbin on your QuickTime ee Mac, ama si fudud kor eega u ka duwan 3aad-xisbiga ciyaartoyda wmv u Mac. Halkan, waxaan ku soo bandhigi doonaa 10ka ciyaaryahan wmv u Mac inuu kaa caawiyo inaad Radidiyaha faylasha wmv ee Mac OS X (Mavericks & Mountain Libaaxa ka mid ah).
5 Free wmv Top Player for Mac: Qeybta 1
Qeybta 2: Beddelaan wmv video in ay la jaan qaada Mac
VLC waa ciyaaryahan wmv aad loo jecel yahay. Waa ciyaaryahan cross-madal warbaahinta la jaan qaada Windows, Mac OS iyo Linux. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ciyaari wax ku dhowaad files multimedia iyo sidoo kale DVD, CD Audio, VCD, iyo in ka badan. Sidoo kale waxa ay taageertaa codecs badan sida MPEG-2, DivX, H.264, MKV, WebM, wmv, MP3, iwm
Ayaa dunida ka mid ah QuickTime Player 7 ogaan doontaa in ay Radidiyaha kartaa files wmv oo aan fur-in kasta oo lagu rakibay. Haa, QuickTime Player 7 ayaa taageero fiican u codecs. Sidaas darteed haddii aad wax kama qaba isticmaalaya version wayn ee QuickTime, ma ahan fikrad xun afterall si loo soo dajiyo QuickTime Player 7 sidii aad ciyaaryahan Mac wmv.
Tani ciyaaryahan wmv u Mac ayaa noqonaya mid aad iyo aad u badan oo caan ah sababta oo ah balaadhan audio iyo video taageero qaab, user-friendly interface iyo sidoo kale design oo quruxsan oo dareen leh. Anigu shakhsi ahaan rumaysan ciyaaryahankaan waa xoog badan yahay software waa-leeyihiin. Ka sokow files wmv, waxa ay sidoo kale taageertaa iyo playbacks qaabab video kale oo QuickTime ku guuldareysto inuu natively taageeraan.
Inkastoo MPlayer ma aha sida uu shacbiyad u VLC, waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu wmv si weyn loo isticmaalo dadka isticmaala Mac. Waxa ay taageertaa badan oo MPEG / VOB ah, ASF / WMA / wmv, cancer, QT / MOV / MP4, AVI, Ogg / OGM, RealMedia, Matroska, lowska, NuppelVideo iyo wax ka badan.
App Tani waxay sidoo kale waa Divx weyn Player for Mac. DivX Player bixisaa movies oo tayo sare leh, muujinaya TV iyo web video clips oo siman-aragnimo video loo maqli karo. Iyada oo ay taasi ciyaaryahan Free wmv u Mac, waxaad ka ciyaari kartaa videos qaabab kala duwan, sida wmv, AVI, DIVX, MKV, MP4, iwm
File wmv ayaa ka muuqo la socon karin Mac kumbiyuutarada. Si aad u ciyaaro file wmv ah ee Mac oo ay ka faa'iidaystaan ​​ka buuxa files wmv aan loo kala soocin (ie si ay u daawadaan on QuickTime, waxaa xaalkaa ku iMovie ama FCP, waxay dajiyaan in Lugood ama iwm), inaad si fiican u badalo lahaa ee wmv soo gudbin si qaab file Mac-socon. Si aad u samayn, waxaad isku dayi kartaa soo Converter Video for Mac . Waxay kaa caawinaysaa in aad si loogu badalo wax video ilaa 30X dhaqso oo aan khasaaro tayo leh.
Talaabada 1: Orod software tan iyo markaas dajiyaan files wmv aad u gal interface by haboon feature jiitaa-iyo-dhibic. Tallaabada 2: In ay Qaabka Output . liiska, waxaad dooran kartaa qaab wax soo saarka sida ay tahay aad loo maqli karo doorashada Talaabada 3: Hit badalo on geeska midig ugu hooseysa interface ka.
Waxaad si fiican xallin karo files wmv ka incompatibility la Mac isticmaalayn kama dambaysta video Converter.
Wixii faahfaahin dheeraad ah, waxaad sidoo kale gudbin karaan hoos ku tutorial video ah:
3 waxyaalood in la ogaado oo ku saabsan AVCHD on Mac
Mac Mini Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Mac Mini
> Resource > Mac > Top 5 wmv Players u Mac Options